အပန်းဖြေခြင်း - မိသားစုခရီးသွားခြင်း Seymour, IN | ဂျက်ဆင်ကောင်တီ itor ည့်သည်စင်တာ
အောက်တိုဘာလ 22, 2021 812.524.1914
ဂျက်ဆင်ကောင်တီသည်ကြီးမားသောစွန့်စားမှုတစ်ခုကိုပေးသည်။ လှပသောသစ်တောများ၊ အမျိုးသားတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ခိုလှုံရာနှင့်အပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုသည်မိုင်ပေါင်းများစွာတောင်တက်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း၊ မြင်းစီးခြင်းလမ်းကြောင်းများအပြင်ငါးဖမ်းခြင်း၊ ဂျက်ဆင်ကောင်တီသည်ဂေါက်ကွင်းနှစ်ခုနှင့်နှစ်စဉ်ပြင်ပပွဲများအတွက်နေရာဖြစ်သည်။
BIKE Jackson County“ Get Out and Ride” မြေပုံကိုကူးယူရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
Jackson County Outdoor Rec Guide ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ
ဂျက်ဆင်ကောင်တီ၊ IN တွင်အဆောက်အ ဦး အပြင်အပန်းဖြေခြင်း
ဂျက်ဆင်ကောင်တီသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချစ်မြတ်နိုးသူများအတွက်spotကထောင်ပေါင်းများစွာသောရေကန်များ၊ သစ်တောများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများနှင့်ပြည့်စုံသည်။ မတူကွဲပြားသောတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား whitetail သမင်မှသည်ရိုင်းသောမြည်းများအထိသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုရှာဖွေလေ့လာပြီးတောရိုင်းဘက်ခြမ်းတွင်စွန့်စားခန်းတစ်ခုယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏သစ်တောများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုများသည်သင်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုရှာဖွေသည်ဖြစ်စေ၊ ထို့အပြင်စက်ဘီးစီးခြင်းနှင့်စခန်းချနေရာများစွာကိုခေတ္တတည်းခိုရန်သေချာစေပါ။ အတွေ့အကြုံရရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အတိုင်းသဘာဝနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
တောင်တက်ခြင်းသည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီရှိနေထိုင်သူများနှင့် visitors ည့်သည်များအတွက်ရေပန်းစားသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကအတွေ့အကြုံအားလုံးအဆင့်မြင့်တဲ့တောင်တက်သမားတွေအတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကြောင့်ပါ။ Jackson-Washington ပြည်နယ်သစ်တော၊ Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ခိုလှုံရာနှင့် Starve Hollow ပြည်နယ်အပန်းဖြေစခန်းအကြားဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်မိုင် ၅၀ ကျော်သောတောင်တက်လမ်းကြောင်းများရှိသည်။
ဒေသတစ်ခုလုံးမှ Anglers သည် Jackson ကောင်တီ၏ရေကိုရာသီတစ်လျှောက်လုံးဖြည့်သည်။ Jackson-Washington ပြည်နယ်သစ်တော၊ Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောနှင့် Starve Hollow ပြည်နယ်အပန်းဖြေAreaရိယာတို့တွင်ငါးဖမ်းခြင်းအခွင့်အလမ်းများအပြင်ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်ငါးဖမ်းသမားများပျော်မွေ့သောမြစ်နှစ်စင်းရှိသည်။
အရှေ့ဖော့ဖြူမြစ်သည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီမှတစ်ဆင့်ထောင့်ဖြတ်စီးဆင်းသွားပြီးခရိုင်တစ်လျှောက်ရှိအများပြည်သူသုံးဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများစွာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းကိုရှာတွေ့နိုင်သည် ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ။ Muscatatuck မြစ်သည် Vernon နှင့် Washington မြို့နယ်များနှင့် Jackson နှင့် Washington County တို့နှင့်လည်းနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ပြီးအများပြည်သူသွားနိုင်သောနေရာများစွာရှိသည်။ ဂျက်ဆင်ကောင်တီရှိမြစ်များကိုအသုံးပြုသူများသည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်မစတင်မီစည်းမျဉ်းများကိုဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းထားသည်။ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုပါ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
Kayaking သည်ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်တိုးတက်လာသည့်ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူအများစုကအရှေ့ Fork White မြစ်နှင့် Muscatatuck မြစ်ကိုသဘာဝမှထွက်ခွာရန်နှင့်လေ့လာစူးစမ်းရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်။ ကေးကေးများကိုဂျက်ဆင် - ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်သစ်တော၊ Starve Hollow ပြည်နယ်အပန်းဖြေနေရာနှင့် Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောများတွင်လည်းခွင့်ပြုထားသည်။ Starve Hollow သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်း၎င်း၏ရေကန်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်လှေစီးကိုငှားရန်ပင်ပေးသည်။
ဂျက်ဆင်ကောင်တီရှိနေရာအတော်များများသည်ငှက်များအတွက်နေရာများအနားယူနေသောကြောင့်နှစ်စဉ်နွေ ဦး ရာသီရွှေ့ပြောင်းနေစဉ်အတွင်းသဲကန္တာရအစုအဝေးတစ်ခုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပါ။ ပျံသန်းနေသောပြောင်သောရွှေလင်းတကိုသူလျှိုလုပ်ပါ။ မြစ်တောသည်ကျောက်ဆောင်များပေါ်တွင်အတူတကွဆုပ်ကိုင်နေသည်၊ သို့မဟုတ်ကျေးလက်ဒေသတလျှောက်စားကျက်နေသည့်သမင်များကိုကြည့်သည်။
Jackson County တွင်ပျော်စရာနေရာများစွာကိုသင်သေချာစွာရှာဖွေနိုင်သည်။
Hemlock Bluff သဘာဝထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး
ဂျက်ဆင် - ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သစ်တော / Skyline Drive ကို
Knobstone Glade သဘာဝထိန်းသိမ်းရေး
ဂျက်ဆင်ကောင်တီ၏တောင်ကုန်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးထိုသင်တန်းတွင်အမျိုးသားများအတွက်ခြံဝင်း ၃,၁၂၅ ကျင်းနှင့် ၂,၃၄၅ အမျိုးသမီးများအတွက်တန်းတူ ၃၅ ခုပါသောတွင်းပေါက် ၉ ခုပါရှိသည်။ ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ရေစာဘားနှင့်လိုလားသူဆိုင်တစ်ဆိုင်တို့ပါဝင်သည်။ Hickory Hills ဂေါက်ကလပ်သည် Brownstown ရှိ ၁၅၀၉ အက်စ်ပြည်နယ်လမ်း ၁၃၅ တွင်တည်ရှိသည်။
I-65 အနီးတွင်အဆင်ပြေစွာတည်ရှိပြီး Shadowood သည်အပေါက် ၁၈ ခုပါ ၀ င်ပြီး ၇၂ နေရာတွင်ရှိပြီး ၆၃၀၉ ခြံဝိုင်းရှိသည်။ အဆောက်အအုံများတွင် clubhouse၊ တဲအိမ်၊ သရေစာဆိုင်၊ လိုလားသူဆိုင်နှင့်ကားမောင်းခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ Shadowood သည် Seymour ရှိ 18 N. Sandy Creek Drive တွင်တည်ရှိသည်။
ဂျက်ဆင်ကောင်တီ, IN ခုနှစ်တွင်စခန်းချ
ကျွန်ုပ်တို့၏အပန်းဖြေနေရာများနှင့်ပန်းခြံများသည်အခန်းများ၊ အခန်းများ၊ RV site များနှင့်စရိုက်လက္ခဏာများသောနေရာများသို့စခန်းချနေရာသုံးမျိုးပေးသည်။ အခန်းများသည်အတွင်း၌အိပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သူများ၊ တဲသို့မဟုတ် RV မပိုင်ဆိုင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ RV site များသည် visitors ည့်သည်များအားလျှပ်စစ်မီးရရှိရန်နေရာတစ်ခုပေးသည်။ မူလတန်းစခန်းချနေရာများသည်ရိုးရာစခန်းချနေရာများအတွက်တဲများနှင့်မီးပွိုင့်ပေါ်တွင်ချက်ပြုတ်ခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ပြည်သူ့စခန်းချအခွင့်အလမ်းများကိုမှာရရှိနိုင်ကြသည် ဂျက်ဆင် - ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သစ်တော or ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးပြည်နယ်အပန်းဖြေAreaရိယာ.
ပြီးပြည့်စုံသောစခန်းချနေရာကိုရှာဖွေပြီးနောက်လွယ်ကူသော၊ အလွန်ကြမ်းတမ်းသည့်လမ်းကြောင်းအမျိုးမျိုးသို့ခြေလျင်ခရီးကိုနှစ်သက်ပါ။ တောင်တက်စက်ဘီးစီးခြင်းကဲ့သို့ပင်ပြည်နယ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဒေသများစွာတွင်မြင်းစီးခြင်းကိုရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ငါးဖမ်းခြင်းအစီအစဉ်သည် အကယ်၍ ဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်လှေလှော်လှေ၊ ကယက်လှေနှင့်ကနူးငှားရမ်းခြင်းများကိုရွေးချယ်ပြီးရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပြည်နယ်လိုင်စင်လိုအပ်ပါသည် မိသားစုအတွင်းရှိထိုမုဆိုးများကိုမမေ့ပါနှင့်။ သင့်လျော်သောလိုင်စင်ဖြင့်အမဲလိုက်ခြင်းကိုနေရာအမျိုးမျိုးတွင်ပြုလုပ်သည်။ မိသားစုရှိရေကူးသူများသည် Starve Hollow ပြည်နယ်အပန်းဖြေနေရာ၌ကမ်းခြေနှင့်ရေကိုချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မည်။
Seymour, IN Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ခိုလှုံရာ
နှစ်ပေါင်းများစွာဂျက်ဆင်ကောင်တီတွင်နေထိုင်သူများနှင့် visitors ည့်သည်များသည် Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၌သဘာဝအလှ၏လှပမှုကိုခံစားခဲ့ကြရသည်။ thousandsကထောင်ပေါင်းများစွာwetကများနှင့်သစ်တောareasရိယာများဖြင့် visitors ည့်သည်များသည်ကောင်းမွန်သောအပြင်ဘက်တွင်လမ်းအသစ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ခိုလှုံရာယူအက်စ် ၅၀ မှအဝေးပြေးလမ်းမကြီး ၆၅ နှင့်အကွာအဝေး ၅၀ အကွာတွင်ရှိပြီးအင်ဒီယာပိုပိုလစ်၊ လူးဝစ်ဗေးလ်နှင့်စင်စင်နာတီတို့မှအလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်သည်။
Muscatatuck တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ခိုလှုံရာသို့သွားရောက်သည့်အခါမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်လှုပ်ရှားမှုများရှိသည်။ visitors ည့်သည်များစွာအတွက်ခိုလှုံရာ၏အဓိကအချက်များထဲမှတစ်ခုမှာတိရိစ္ဆာန်များကိုသူတို့၏သဘာဝနေရင်းဒေသများ၌တွေ့မြင်ရန်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ ခိုလှုံရာသည်ခမ်းနားထည်ဝါ။ အသိုက်ပြောင်သောရွှေလင်းတများအပါအဝင်ရွှေ့ပြောင်းငှက်မျိုးစိတ် ၃၀၀ ကျော်၏နေရာဖြစ်သည်။ လူများသည်ခိုလှုံရာရေလမ်းကြောင်း၌အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်ကစားခြင်းများပြုလုပ်သောကြောင့်ဒေသခံ otters ၏ဒေသခံကိုလိုနီကိုကြည့်ရတာနှစ်သက်ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ visitors ည့်သည်များသည်လှပသောလမ်းကြောင်းများဖြင့်သွားလာရခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီး Myers မိသားစုပိုင် ၂၀ ရာစုအစောပိုင်းကပြန်လည်ပြုပြင်ထားသော Myers's Cabin ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။ ငါးဖမ်းခြင်း၊ အမဲလိုက်ခြင်းနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဓာတ်ပုံများသည်လည်းလူကြိုက်များသောလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်သည်။
ခိုလှုံရာ Wings Over Muscatatuck၊ Log Cabin Day၊ Kid Fishing Day၊ Wetlands Day၊ Sandhill Crane ပွဲစသဖြင့်နှစ်စဉ်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုလည်းကျင်းပပေးခဲ့သည်။
Muscatatuck တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ခိုလှုံရာကို ၁၉၆၆ ခုနှစ်တွင်ရွှေ့ပြောင်းငှက်များအနားယူရန်နှင့်ကျွေးမွေးရန်နေရာအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမြေနှင့်ရေလမ်းကြောင်းများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ရန်၊ ငှက်များ၊ နို့တိုက်သတ္တဝါများ၊ တွားသွားသတ္တဝါများနှင့်ငါးများကိုအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
လာမည့်အဖြစ်အပျက်များ၊ အပန်းဖြေနေရာအချို့သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများရှိသော itors ည့်သည်များသည် Facebook ရှိ Muscatatuck အမျိုးသားတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုသို့ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ် ၈၁၂-၅၂၂-၄၃၅၂ သို့ဆက်သွယ်သင့်သည်။